अन्नपूर्ण होटलका कर्मचारीमा डेंगु, अतिथि कति सुरक्षित ? – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
११ आश्विन २०७७, आईतवार ०१:३५ English
अन्नपूर्ण होटलका कर्मचारीमा डेंगु, अतिथि कति सुरक्षित ?
निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ कार्तिक । अन्नपूर्ण होटलका आधार दर्जन बढी कर्मचारीमा ‘डेंगु’ को संक्रमण देखिएको छ । सुशिल दाहाल, सुनिल घोष तथा उद्व विष्टलाई देखिएको डेंगु अहिले अन्य कर्मचारीमा मसेत देखिएको छ । दाहाल, घोष र विष्ट निको भएपनि अहिले अन्य थप ४ जना कर्मचारीमा डेंगु देखिएको हो ।
अन्नपूर्णका कर्मचारीहरु बेलकृष्ण श्रेष्ठ, परशुराम न्यौपाने, सचिना सुनुवार र लिला रानामा डेंगुको सक्रमण पाईएको हो । उनीहरु ब्लुक्रस हस्पिटलमा उपचाररत छन् ।
तारे होटलका रुपमा निकै चर्चामा रहेको अन्नपूर्णका कर्मचारीमा डेंगु देखिएपछि त्यहाँ आएर बस्ने पर्यटक र अन्य अतिथिको सुरक्षा कसरी भईरहेको छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । होटलकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपा गुरुङ केही कर्मचारीमा डेंगुको संक्रमण देखिएपनि यसलाई फैलिनबाट रोक्न र अन्य कर्मचारी तथा पहुनामा नलागोस् भन्नका लागि होटल सचेत रहेको बताउँछिन् ।
‘हामीसँग इन हाउस डक्टर छन्, यही उपचार हुन्छ’ उनले भनिन्, ‘हस्पिटलमा उपचाररत कर्मचारीको अवस्थाका विषयमा पनि हाम्रो ‘एचआर’को टिमले नियमित रुपमा बुझिरहेकै हुन्छ ।’
६ कार्तिक २०७६, बुधबार १२:२१ मा प्रकाशित
सम्झनाका लागि न्याय माग्दै राजधानीमा प्रदर्शन	१० आश्विन २०७७, शनिबार १८:१०
रौतहटमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी एक महिलाको हत्या	१० आश्विन २०७७, शनिबार १५:४१
कोरोनाबाट थप एक सैनिक जवानको मृत्यु	१० आश्विन २०७७, शनिबार १५:३४
ललितपुरका ३ जना मेयरमा कोरोना संक्रमण	१० आश्विन २०७७, शनिबार १५:३३
झापामा कैदीबन्दी त्रसित	१० आश्विन २०७७, शनिबार १०:३९
पाल्पा पहिरामा बेपत्ता पाँचै जनाको शव भेटियो	१० आश्विन २०७७, शनिबार १०:३४